नेपालमा भुक्का टुरिस्ट नै बढी – News Portal of Global Nepali
नेपालमा भुक्का टुरिस्ट नै बढी
विन्दु कोइराला सुवेदी, उपाध्यक्ष (वाणिज्य) पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ
पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा पेय पदार्थको डिलरसिपकी सञ्चालक विन्दु कोइराला सुवेदी उद्योग वाणिज्य महासंघ पोखराको वाणिज्यतर्फकी उपाध्यक्ष पनि हुन् । केही समयअघि कोइराला नेतृत्वको उद्योग वाणिज्य महासंघले पर्यटकीय नगरी पोखरामा महोत्सव सञ्चालन गरेको थियो । महोत्सवमा पर्यटनलगायत सबै क्षेत्रको सहभागिता थियो । पश्चिमाञ्चलमा लिंकर्स व्यवसाय र यसको सम्भावनाबारे उनले कुमार राउतले गरेको कुराकानी :
– कन्जुमर आइटमको व्यवसाय हो मेरो । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको लिंकर (पेय पदार्थ) को पार्ट हेर्छौं ।
० पेय पदार्थको व्यवसाय कस्तो छ ?
– ठीकै छ भन्नुप-यो, पर्यटकीय क्षेत्र पोखरामा भएकाले हाम्रा उपभोक्ता विशेष गरी पर्यटक नै हुन् ।
० कति मूल्यसम्मको रक्सी पाइन्छ ?
– महँगा रक्सी सबै आयातित हुन् । अहिले मूल्य तीन लाख रुपैयाँदेखि न्यूनतम मूल्यसम्मका रक्सीहरू बजारमा खपत हुन्छन् ।
० खपत बढी कति मूल्य पर्ने रक्सीको हुन्छ ?
– पाँचदेखि ६ हजार रुपैयाँ पर्ने रक्सीको कारोबार बढी हुन्छ । पर्यटक आउने होटलहरूमा यस्तै मूल्यका रक्सी बढी खपत भएको पाइन्छ ।
० नेपाली उपभोक्ता कतिको आउँछन् ?
– विशेष गरी टेबुल वाइनका उपभोक्ता बढ्दै गएका छन् । रुम टेम्प्रेचरमा रेड वाइन र दिउँसो सेतो वाइनको प्रयोग गर्ने नेपाली उपभोक्ताहरू विस्तारै बढ्दै गएका छन् ।
० कहाँबाट आउँछ नेपालमा रक्सी ?
– थाइल्यान्ड, जापान र सिंगापुरबाट आएको बियर बिक्री बढी हुन्छ भने विभिन्न नामको स्कच पनि बिक्री हुन्छन् । समुद्री किनारमा जति बढी समय गाड्यो, त्यति नै महँगो हुन्छ । १२ वर्षसम्म गाडेको स्कच बढी प्रयोग र महँगो हुन्छ ।
० नेपालमा पनि वाइन उत्पादन हुन्छ ?
– केही फ्याक्ट्री छन्, उनीहरूले टेबल वाइन उत्पादन गर्दछन् । पछिल्लो समय हर्बल ड्रिंक्सका रूपमा विकास गरिएको छ । हर्बल डिं«क्स वाइनमा जडिबुटी मिसाएर सेवनयोग्य बनाइन्छ ।
० स्वदेशमा उत्पादित वाइन नेपालीले किन्न सक्छन् त ?
– यो व्यक्तिमा भरपर्ने कुरा हो, आवश्यकता छ भने औसत नेपालीले पनि किन्न सक्छन् । धादिङमा बनेको वाइन नेपाली उपभोक्तालाई मध्यनजर गरेर उत्पादन गरिएको हो जस्तो लाग्छ ।
० मुस्ताङको मार्फा पनि चर्चित नै छ नि ?
– तर, त्यो ठूलो भोलममा बजारमा आएको मैले अहिलेसम्म देख्न पाएको छैन ।
० रक्सी उपभोक्ता बढेको राम्रो हो ?
– मैले टुरिजम सिटीमा व्यवसाय गरेकी छु । यो पर्यटकका लागि आवश्यक पनि छ । स्वास्थ्यले साथ दिन्छ भने आफ्नो आय हेरेर सेवन गर्ने पदार्थ हो रक्सी । उपभोक्ता बढ्नु नबढ्नु भन्दा पनि हामीले पर्यटकलाई लक्षित गरेर व्यवसाय सञ्चालन गरेको हौं ।
० तर, नेपाली समाजमा रक्सीलाई राम्रो दृष्टिले हेरिँदैन नि ?
– हामीकहाँ नीति नभएर हो । यसमा पनि हामीले बाहिरको हेरेर नीति निर्माण गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । लिंकर पसलमा निश्चित उमेर पुगेका व्यक्तिलाई मात्र प्रवेश दिने चलन हामीकहाँ छैन । पहिला दाल चामलसँगै रक्सी बेच्ने चलन थियो । अहिले लाइसेन्स लिनुपर्ने र बेग्लै पसल राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
० तपाईंहरू पर्यटकका लागि नै बेच्नुहुन्छ ?
– हो, हामी पर्यटकीय क्षेत्रमा व्यवसाय गरेर बसेका छौं । तर हामीकहाँ भुक्का टुरिस्ट बढी आउँछन् । भुक्का भनेको मिनिरल वाटर पनि रिफिल गर्ने ठाउँ खोज्दै हिँड्ने पर्यटक हुन् । पर्यटन विकासका लागि हामीले भुटानबाट सिक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । त्यहाँ एउटा टुरिस्टले न्यूनतम यति खर्च गर्नैपर्ने नियम छ ।
० नेपाल आउने सबै भुक्का पर्यटक हुन् त ?
– सबै भुक्का भनेकी होइन, प्लेन चार्टर्ड गरेर आउने पर्यटकहरू पनि हुन्छन् । तर पर्यटकका लागि राज्यले नीति बनाउँदा भुटानको जस्तो बनायो भने राम्रो हुन्छ भन्न खोजेको मात्र हुँ ।
० त्यसो भए व्यवसायबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्न ?
– असन्तुष्ट पनि छैन, बैंक ग्यारेन्टी देखाएर सामान ल्यायो, बजारमा उधारोमा जान्छ । हाम्रो लगानी क्रेडिटमा जान्छ । विदेशबाट ल्याएको दुई कार्टुन रक्सी बेच्यो भने पनि दुई अढाई लाख रुपैयाँ बजारमा जान्छ । ट्रान्जेक्सन हुने, तर बजारमा पैसा फस्ने भएकाले केही असन्तुष्टि नभएको होइन ।
० अरु व्यवसाय पनि होला नि ?
– त्यस्तो व्यवसाय खासै छैन, तर २–३ वटा बिजनेस अगाडि आएको छ । त्यसका लागि मनस्थिति बनाउँदैछु । निकट भविष्यमा के होला, अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
० कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न के गर्नुपर्ला ?
– हामीकहाँ कृषि क्षेत्रको ठूलो सम्भावना छ । लिडरसिपमा भएका व्यक्तिहरूले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । आफ्नो फाइदाभन्दा पनि राज्यलाई फाइदा हुने कृषि नीति बन्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।
० कसरी व्यवसायी बन्नुभयो ?
– जब देशमा आरक्षणको व्यवस्था सुरु भयो, त्यसपछि आफैंले केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच बनाउन थालें । त्यसका लागि आत्मनिर्भर बन्न जरुरी छ । बाहुन समुदायको भएका कारण आफू योग्य हुँदाहुँदै पनि जातजातिको नाममा अरुलाई अवसर दिनुपर्ने रहेछ, त्यो भन्दा व्यवसाय नै ठीक लाग्यो ।
० कस्तो परिवारमा हुर्कनु भयो ?
– ठीकै भन्नुपर्छ, बुबाको जागिरसँगै खेतीपाती पनि थियो । म माइली छोरी हुँ, दिदीको पनि राम्रै व्यवस्था छ । बहिनी नर्सिङ पेसामा थिइन्, उनीहरू अहिले अमेरिकामा छन् । दाजु लामो समय यूके बसेर नेपाल फर्कनु भएको छ । भाइ इन्जिनियर छ ।
० व्यवसायमा श्रीमान्को सहयोग होला नि ?
– हामी दुवैको एउटै पेसा हो, सहयोग आदान–प्रदान भइरहेको छ । जेठाजु, देवर सरकारी सेवामा हुनुहुन्छ ।
० प्रेम विवाह गर्नुभएको हो ?
– पे्रम विवाह नै भन्नुपर्ला, यसबारे त्योभन्दा बढी कुरा नखोतलौं होला ।
– छोरी बीबीए पढ्दैछिन्, छोरा एमबीबीएस गर्दैछ ।
० जिन्दगी सोचेजस्तै चलेको छ ?
– ब्यालेन्समा छ, लभलाइफमा सन्तुष्ट छु । सोचेजस्तो सबै कहाँ हुन्छ जीवन ? त्यस्तो ठूलो आम्दानी गर्न नसके पनि जीवन ठीकैसँग चलिरहेको छ ।